Dulmarka iyo Su'aalaha Aalaaba la Isweydiiyo ee Barnaamijka Xasilinta Guryaha Kirada ah
Macluumaadka waa Sax laga bilaabo 7/24/2020
Lambarrada telefoonada iyo boggaga mareegaha ee muhiimka ah:
Khadka diiwaangelinta ee Shirkadda Gargaarka Sharciyeed ee Vermont (VLA)/Shirkadda Adeegyada Sharciyeed ee Vermont (VLA): 1-800-889-2047
Shirkadda Gargaarka Sharciyeed ee Vermont/Shirkadda Adeegyada Sharciyeed ee Vermont Mareegta caawimaadda sharciyeed ee Vermont: https://vtlawhelp.org/money-for-past-due-rent
Guryeynta Degdega ah: Xarunta Adeegga Macaashka 1-800-479-6151 ama 2-1-1
Codsiga Barnaamijka Xasilinta Guryaha Kirada ah: https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/
Ururka Kireeyeyaasha Guryaha ee Vermont 802-985-2764 or 888-569-7368
Heerarka Lacag-bixinta Maamulka Guryeynta Gobolka Vermont (VSHA): https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/Voucher-Payment-Standards.pdf
Qoysaska aan weli bixin kirada ama kirada dhulka waxay u-qalmaan caawimaad maaliyadeed. “Qoys” ayaa noqon kara adiga iyo qoyskaaga, ama adiga iyo dadka aad wada degan tihiin. Waxaa laguugu yeeraa “kireystaha.”
Halkee ayay lacagta ku baxaysaa?
Lacagta waxaa si toos ah loo siin doonnaa kireeyeyaasha hadda jira ama kuwa mustaqbalka ama kireeyeyaasha dhulka, haddii ay waafaqaan shuruudaha qaarkood. Lacagta waxay noqon doontaa deeq aysan ahayn in dib loo bixiyo.
Xaaladahee ayaa loogu qalmaa deeqda?
Kireystaha lagu leeyahay ijaarka wuxuu codsi la soo gudbinayaa kireeyaha doonaya inuu lacagta helo oo guriga lagama saarayo kireystaha.
HAA – Xaaladan way u-qalantaa caawimaad.
Kireystaha u baahan carbuunta iyo kirada horumariska ah ee loo baahan yahay si loogu guuro guri la awoodi karo wuxuu codsi la soo gudbinayaa kireeye cusub oo diyaar u ah inuu guri ka kireeyo.
Kireeyaha wuxuu ku leeyahay kiro balse kiraystuhu uma uusan jawaab-celin, kamana uusan jawaabin codsiga deeqda ee kireeyaha ee VSHA.
HAA – Kireeyaha wuxuu heli karaa kalabar kirada uu leeyahay wuxuuna joojin karaa heshiiska kireysiga. Kireystaha waa inuu guuraa kadib geedi-socodka guri ka saarida.
Qof reer Vermont ah oo ku nool huteel lacag lagu jiifto oo lagu bixiyo Kaalmo Guud bil kasta tan iyo bishii Maarso, kadib markuu la shaqeeyay barnaamijka diiwaagelinta isuduwan.
HAA – WAC 211 ama booqo helpingtohousevt.org si aad u hesho barnaamijka diiwaangelinta isuduwan aadna u hesho caawimaad
Ma jiraa dakhli go'an si loo helo lacagtan?
Maya. Ma jirto tijaabo dakhli si loo helo gargaarkan.
Miyaa la iiga baahan yahay inaan hayo dakhli aan waayay cudurka COVID awgiis si aan ugu qalmo?
Maya. Lagaagama baahno dakhli aad waysay cudurka COVID awgiis si aad u hesho caawimaadan maaliyadeed.
Waxaan la kulmayaa dhibaato dhaqaale cudurka COVID awgiis, balse waxaan ku bixiyay kiradayda anigoo isticmaalaya keyd ama amaah lacageed. Miyaan u-qalmaa?
Maya. Si aad ugu qalantid kaalmada kirada aan la bixin iyadoo loo marayo barnaamijkan, adiga iyo kireeyaha waa inaad cadeysaan in hadda lagugu leedahay kiro, iyo in lacagtaas si toos ah loo siinayo kireeyaha. Nasiibdarrose, haddii aad isticmaashay lacago kale oo aan hadda lagugu lahayn kiro, uma qalantid deeqdan.
Duddadayda waxay u baahan tahay dayactir. Miyaan u-qalmaa?
Guryaha kirada ah waxay u-qalmaan caawimaad haddii ay buuxiyaan Xeerka Guriyeynta Vermont ama ay buuxin doonaan 30 maalmood gudaheeda. Si kastaba ha noqotee, hadduu gurigaagu u sugnaadeen xadgudubyo xeerar oo badqabka nolosha halis ku ah, kirada aan la bixin lama heli karo ilaa laga dayactirayo. Liiska xadgudubyada ayaa ku yaala codsiga waxaana ku jira dhibaatooyinka sida:
biyo kulul la'aan
dhibaatooyin koronto oo sababi kara cillad koronto ama dab
Gudaha codsigaagu, haddii aadku sheegto in gurigaagu leeyahay xadgudubyo xeerar oo badqabka nolosha halis ku ah, waxaa laguu gudbin doonnaa Sarkaalka Caafimaadka Magaalada ee maxalliga ah iyo Shirkadda Gargaarka Sharciyeed ee Vermont.
Waa maxay macnaha "hoy-la'aan" marka la eego macnaha guud ee arrintan?
Ujeeddada barnaamijkan dartiis, qofka ayaa loo qaddariyo inuu yahay "hoy-laawe" hadduu gargaar guriyeyn oo degdeg ah ka helo Adeegyada Dhaqaalaha ee DCF bil kasta tan iyo bishii Maarso 2020.
Kireeyahaygu wuxuu mar hore maxkamadda geeyay kiis guri ka saarid. Miyaan wali u-qalmaa?
Haa. Dhab ahaan, haddii kireeyahaagu aqbalo deeq lacageed, waa inuu ka noqdaa kiis kasta oo guri ka saarid.
Sidee ayaan u codsadaa kirayste ahaan?
Waxaan kugula talineynaa inaad bilowdo adigoo kala hadlaya kireeyahaaga wixii ku saabsan codsashada iyo xaqiijinta inta ay dhan tahay kirada lagugu leeyahay. Kireyste ahaan, waad codsan kartaa adoo soo dejisanayo, keydsanayo oo buuxinayo codsiga laga helo mareegta Maamulka Guryeynta Gobolka Vermont (VSHA): https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/RHSP-Tenant-Application-9.3.20.pdf.
Kireeyahaagu waa inuu sidoo kale buuxiyaa Xaqiijinta Kireeyaha ee laga helo mareegta VSHA: https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/RHSP-Landlord-Certification-9.3.20.pdf.
Caddada kirada aan la bixin ee ku qoran codsiyadaan waa inay islahaadaan. Mar hadduu Maamulka Guryeynta Gobolka Vermont (VSHA) helo labadan foom, wuxuu go'aan ku gaari doonnaa 10 maalmood gudahooda.
Miyaa loo sheegayaa kireeyahayga haddii aan codsado?
Waxaan kugula talineynaa inaad la hadasho kireeyahaaga kahor inta aadan codsan si aad u xaqiijiso inta ay dhan tahay kirada lagugu leeyahay waana inaad ka codsato magaca u diiwaangashan ganacsiga kireeyahaaga. Kireeyahaaga waxaa looga baahan yahay inuu soo gudbiyo dukumiintiyada kahor intaan codsigaaga la dhameystirin. Hadduu kireeyahaagu uusan rabin inuu ka qeybqaato barnaamijka, la xiriir Shirkadda Gargaarka Sharciyeed ee Vermont si aad u hesho caawimaad.
Miyaa la iiga baahan yahay inaan daabaco magacayga oo saxiixo codsigan?
Maya, waxaad ku qori kartaa magacaaga xariiqda saxiixa halkii aad ka daabici lahayd oo saxiixi lahayd dukumiintiga. Hubso inaad ku soo dejisato oo ku keydsato codsiga kombuyuutarkaaga ama aalad kale kahor intaadan buuxin. Mar haddii la buuxiyo, waxaad ugu diri kartaa iimayl rentrelief@vsha.org.
Haddii la ila deggan yahay, miyuu mid walba codsan?
Hadduu qoyskaagu hal heshiis kiro la galay kireeyaha, waa inaad soo gudbisaa hal codsi oo ay ku jiraan dhammaan kirada lagu leeyahay dadka kula deggan oo dhan.
Sidee ayuu kireeyaha u codsadaa?
Si loo codsado, kireeyaha waa inuu buuxiyaa foomka xaqiijinta, foomka debaajiga tooska ah, iyo foomka W-9. Dhammaantood waxaa laga helaa mareegta VSHA: https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/. Waa inuu sidoo kale u keenaa VSHA jeeg la diiday. Ururka Kireysteyaasha Vermont (802-985-2764 ama 888-569-7368) ayaa siinaya caawimaad kireeyeyaasha codsanaya.
Hadduu kireyste codsado, miyay tahay inuu kireeye ka qeybqaato? Maxaa dhacaya haddii aysan ka qeyb qaadan?
Kireeyeyaasha waxay dooran karaan inaysan ka qeybqaadan barnaamijkan. Ka qeybqaadashadu waxay uga baahan tahay inay oggolaadaan waxyaabaha qaarkood sida ka dhaafida khidmadaha daaha iyo in guriga looga saarin lacag-bixin la’aan in muddo ah. Waxay go'aansan karaan inaysan waafaqin shuruudahaas. Haddii lagugu leeyahay kiro aan la bixin oo aad wajahayso guri ka saarid, waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarka Shirkadda Gargaarka Sharciyeed ee Vermont 1-800-889-2047 si aad talo uga hesho.
Maxay tahay inaan sameeyo si aan u codsado haddii aan ahay hoy-laawe?
Haddii aad codsanayso lacag si lagaaga caawiyo carbuunta iyo kirada si aad u degto guri, adiga iyo qofka kireeyahaaga noqon doonna labadiinaba waxaa la idin kaga baahan doonnaa inaad soo gudbisaan codsiyo. Codsiyada waa inay sheegaan:
caddada carbuunta, iyo
inta ay dhan tahay kirada horumariska ah ee la iska rabo si aad u degto guriga.
Caddadahani waa in isku mid noqdaan labada codsiba.
Haddii aad hoy-laawe tahay oo aad u baahan tahay kabista kiro socota, VSHA ayaa kuu sheegi doonta inaad marka hore la shaqeyso Diiwaangelinta Isuduwan. Wac 211 ama booqo helpingtohousevt.org si aad u hesho barnaamijka diiwaangelinta isuduwan.
Maxay ka dhigan tahay inuu kireysigu noqdo mid aan “la sii wadi karin”? Yay tahay inuu calaamadeeyo sanduuqaas ku yaala codsiga?
Kireysigaagu waa mid “aan la sii wadi karin” haddii — iyadoo aan loo eegin isbeddelada dakhliga ama kharashka cudurka COVID-19 awgiis —guriga aad hadda deggan tahay ma aysan awoodi karin qoyskaaga. Waxaad ku sugnaan kartaa xaaladdan haddii aad heshay guri la awoodi karo, balse aad u baahan tahay lacagta carbuunta ah ama kirada horumariska ah ee loo baahan yahay si aad u guurto.
Haddii aad hesho dakhli aad u hooseeya oo aadan heli karin guri aad awoodi karto, wac 211 ama booqo helpingtohousevt.org. Waxaad ka heli kartaa urur kaa caawiya sidii aad u heli lahayd macaashka guryeynta oo dheeraad ah si aad u awoodid guriga.
Foomamka ma lagu heli karaa luqaddo aan Ingiriisi ahayn?
Foomamka waxaa hadda lagu heli karaa oo keliya Ingiriisi, balse dhawaan ayaa lagu heli doonnaa luqado kale. Maamulka Guryeynta Gobolka Vermont (802-828-3295) wuxuu diyaarin doonnaa turjubaanno. Haddii aad dhib ku qabtid codsiga, waxaad kala xiriirtaa Shirkadda Gargaarka Sharciyeed ee Vermont
(1-800-889-2047) oo sidoo kale waan diyaarin doonnaa turjubaanno.
Maxaan sameeyaa haddii aan su'aalo ka qabo codsiga?
Kireysteyaasha u baahan in laga caawiyo codsiga waxay la xiriiri karaan khadka diiwaangelinta ee Shirkadda Gargaarka Sharciyeed ee Vermont: 1-800-889-2047. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka, oo ay ku jiraan Su'aalaha Aalaaba La Isweydiiyo (FAQs), waxaa laga heli karaa mareegta VSHA: https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/. Mareegtayada caawimaadda sharciyeed ayay sidoo kale ku jiraan waxoogaa macluumaad ah: https://vtlawhelp.org/money-for-past-due-rent
Immisa lacag ah oo kirada aan la bixin ayaan heli karaa?
Bil kasta oo lagugu leeyahay kiro, VSHA waxay siin doontaa kireeyahaaga caddada lagugu leeyahay ama heerka lacag-bixinta VSHA—midba kii hooseeya. Hadduu kireeyahaagu aqbalo lacagta deeqda ah, ma ku qasbanid inaad bixiso wixii khidmad ama caddad daahda ah oo lagugu leeyahay oo ka sarreysa heerka lacag-bixinta.
Maxaa dhacaya haddii kiradayda billaha ah ay ka sareyso heerka lacag-bixinta ee VSHA?
Asagoo aqbalaya lacagta deeqda ah, kireeyahaagu wuxuu ogolaanayaa inuu aqbalo ugu badnaan heerka lacag-bixinta VSHA ee bil kasta, xitaa haddii lagugu leeyahay wax ka badan lacagtaas. Lagaagama baahno inaad bixiso wax caddad ah oo lagu leeyahay oo ka sarreeysa heerka lacag-bixinta.
Kireeyahayga ma aqbali doono inuu buuxiyo dukumintiga haddii aan lacag dheeraad ah oo gaar ah bixin. Maxaan sameeyaa?
Lacag-bixinada gaarka ah lagama oggola barnaamijka. Kireeyahaagu waa inuusan ku adkaysan inaad bixiso wax ka badan heerka lacag-bixinta VSHA ee bil kasta. Hadduu kireeyahaagu uusan oggolaan doonin shuruudaha barnaamijka, kala xiriir Shirkadda Gargaarka Sharciyeed ee Vermont lambarka
1-800-889-2047. Hubso inaad na soo wacdid haddii aad heshay ogeysiiska ama warqadda joojinta kireysiga ee ku saabsan kiiska maxkamadeed.
Waxaan ahay hoy-laawe. Immisa lacag ah ayaan heli karaa si la iiga caawiyo inaan helo guri cusub?
Haddii aad degganeyd guri lagu bixinayay Kaalmo Guud mar walba tan iyo bishii Maarso, waxaad u-qalmi kartaa carbuun iyo kiro horumaris ah iyo kiro bisha ugu horeysay iyo ugu dambeysay ah. Si aad u codsato, adiga iyo kireeyahaaga mustaqbalka waa inaad codsataan labadiinaba. Codsiyadiinu waa inay sheegaan:
inta ay dhan tahay kirada horumariska ah ee loo baahan yahay si aad u degto guriga.
Codsigaaga waxaa loo diri doonnaa Hay'adda Adeegyada Aadanaha ee Vermont si ay kuu caawiyaan, ama waxaad la xiriiri kartaa hay'adda diiwaangelinta isuduwan ee degmadaada. Wac 211 ama booqo helpingtohousevt.org si aad u hesho barnaamijka diiwaangelinta isuduwan.
Ma heli karaa lacagtan haddii aanan ahayn muwaadin? Ka waran haddii Aan Ku Joogin waddankan aqoonsi Sharci ah?
Barnaamijka xasilinta guryaha kirada ah waxaa heli kara qof kasta oo hadda guri kiro ah kaga jiro Vermont iyadoo la eegeyn jinsiyadda ama sharciga socdaalka.
Haddii la ii oggolaado oo kireeyahaygu helo lacagta, taasi miyay iga difaacaysaa guri ka saarid? Muddo intee la'eg?
Haddii kireeyahaagu aqbalo lacagta deeqda ah, waa inuu ka noqdaa wixii dacwad guri ka saarid ah oo jirta, dhaafaa khidmadaha daahay oo dhan, oo tixgeliyaa in kiradaada aan la bixin si buuxda looga bixiyo bilooyin kasta oo deeqdu dabooshay. Kireeyahaagu wuxuu sidoo kale waafaqayaa inuusan kaaga saarin guriga kiro bixin la'aan ilaa bilooyinka ay deeqdu dabooshay ama ilaa 6 bilood, hadba kii yar. Si kastaba ha noqotee, kireeyahaagu wuxuu kaaga saari karaa guriga "sabab caddeyn leh" (tusaale ahaan, haddii aad si dhab ah u jebiso xeerarka heshiiska ijaarkaaga) haddii arrin cusub ay soo baxdo kadib markii la bixiyo deeqda. Haddii kireeyuhu aqbalo lacagta kirada aan la bixin, oo uusan raacin sharciga, kireeyaha waxaa laga yaabaa inuu kuu celiyo lacagta
Miyaa lacagtan loo xisaabayaa dakhli saameyn ku yeelan kara macaashka loo qalmo ama canshuurahayga?
Lacagtan waxaa si toos ah loo siinayaa kireeyaha. Waxay yareynaysaa kharashkaaga guryeynta. Haddii barnaamij macaash tixgeliyo kharashka guryeynta ee aad bixiso, wuxuu saameyn karaa macaashkaaga. Haddii barnaamij macaash uusan xisaabinin kharashaadka guryeynta, ma yeelan doono saameyn. (Tusaale ahaan: Medicaid ma tixgeliyo kharashaadka guryeynta, marka tani ma saameyn doonto caymiska Medicaid.)
Sidee ayuu Gargaarka Sharciyeed ee Vermont iiga caawin karaa arrintan?
Qof kasta waa inuu isku dayaa inuu bilaabo hgeedi-socodkan isagoo:
la xiriirayo kireeyaha
xaqiijinayo inta lagu leeyahay, oo
Haddii aadan haysan kumbuyuutar ama telefoon casri ah, weydii inuu kireeyahaagu kula codsan doono oo aad isticmaali doonto kumbuyuutarkiisa. Ama isticmaal kumbuyutarka uu leeyahay saaxiibkaa. Haddii aad dhib qabto inta lagu jiro geedi-socodkaas, wac Shirkadda Gargaarka Sharciga ee Vermont. Ama, haddii aadan hubin waxaad aad ku qorayso codsiga, sidoo kale waad nala soo xiriiri kartaa. Wac
Ma waxaa jira macaash la sugo si loo codsado, si aan u helo caawimaad kiro bilooyin badan?
Barnaamijkan ayaa ah mid sida loo kala horreeyo, ayaa laguugu adeegayaa ah, kaasoo leh lacag go'an oo xaddidan. Waa inaad sida ugu dhakhsaha badan u gudbisaa codsigaaga. Haddii aad la dib dhacdo kirada kahor dhammaadka sannadka, markaa waad codsan kartaa caawimaad mar labaad.
Waxaan u baahannahay in la iga cawiyo rahantayda.
Hay'adda Maaliyadda Guryeynta ee Vermont ayaa maamusha barnaamijka loogu talagalay lacagta gargaarka guryeynta. Codsigu wuxuu ku jiraa mareegta Hay'adda Maaliyadda Guryeynta ee Vermont (VHFA): http://www.vhfa.org/map.
Source URL: https://vtlawhelp.org/barnaamijka-xasilinta-guryaha-kirada-ah